Kedụ ka anyị ga - esi chịkwaa ma chịkwaa mmetụta na - adịghị mma anyị? | Ndị nne Taa
Kedụ ka anyị ga - esi chịkwaa ma chịkwaa mmetụta na - adịghị mma anyị?
Maria José Roldan | | Atụmatụ, Ezinụlọ
Dị ka ndị nne na nna, ọ dị mkpa ka anyị ghọta mmetụta na-adịghị mma iji mara na ha dị mkpa iji nwee ike ịga n'ihu na ndụ. Mmetụta na-adịghị mma adịghị njọ ma ọ dị mkpa ịkụziri ụmụaka ịghọta na mmetụta niile, ndị a na-ewere dị ka ndị dị mma na ndị a na-ewere dị ka ndị dị njọ, dị mkpa na ndụ.
Otu ụzọ kachasị mma iji merie mmetụta uche anyị bụ nnabata. Nke a bụ ihe mmụta nke ụmụaka kwesiri ịkụziri site na nwata. Dị nnọọ ka uru ndị na-adịghị mma na-aba, na-eme ka anyị nwee ọ beụ oge niile o nwere ike imebi obi anyị niile.
Ekwesiri ikuziri umuaka ka ha ghota na nwute, onuma, iwe, iwe ... bu mkpali nke obi na odighi ka odi. Naanị anyị ga-amụta ịchịkwa mmetụta ndị ahụ na-enweghị ha ijikwa anyị.
Must ga-abụrịrị ihe atụ n'ị nabata mmetụta na-adịghị mma, n'ime anyị na ndị ọzọ, ha bụ akụkụ nke ịbụ mmadụ, ọ na-enye anyị ohere iwulite ọmịiko ka mma maka otu ha ga-esi gosi onwe ha na ihe kpatara ya. Kama ịrapagidesi ike n'echiche na ekwesịrị izere mmetụta ndị na-adịghị mma ma ọ bụ nke ahụ bụ 'ihe ọjọọ' n'ụzọ ụfọdụ, anyị aghaghị ịnakwere na ha bụ akụkụ ebumpụta ụwa nke ndị anyị bụ.
Ozugbo anyị mere nke ahụ, anyị nwere ike ịmalite ịgbanwe ụzọ anyị nwere ike isi zaghachi ha ma zụlite omume ndị nwere isi ma na-agbakwunye uru n'ụzọ anyị si egosipụta onwe anyị na metụtara ndị ọzọ. Nke a ga-abụ nnukwu ihe ụmụntakịrị ga-amụta, mana maka ha ị ga-abụ ezi ihe atụ. Chee echiche banyere mmetụta uche gị mgbe ọ bụla ị hụrụ ha, chee ihe kpatara gị ji nwee ya na otu a, ị nwere ike ịchịkwa ha karịa. Site ugbu a gaa na mmetụta ndị na-adịghị mma agaghị abụ nsogbu nye onye ọ bụla!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị nne Taa » Ezinụlọ » Kedụ ka anyị ga - esi chịkwaa ma chịkwaa mmetụta na - adịghị mma anyị?
Mgbe ime DNI nye nwa
Omumu nkwadebe banyere imu umu